Ciidamada PMPF oo Al Shabaab ka qabsaday deegaano muhiima buuraha Calmadow
August 12, 2018 - Written by Editor
Ciidamada badda dowladda Puntland ee loo yaqaan (PMPF) ayaa howlgalo ka dhan ah kooxda Al Shabaab ka fuliyey Buuraha Calmadow waxaana ay malayshiyaadka Al-shabaab ka saareen buurta Habar-humbulo iyo ceelka lagu magacaabo”Ceel unkud” oo Al Shabaab Saldhig u ahaa .
Sarkaal sare oo ka tirsan cutubyada la-dagaallanka argagixisada ee ciidamada(PMPF) ayaa waxaa uu la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ka howl gasha Puntland isaga oo sheegay in ay khasaaro kala duwan u geysteen waxaa kale oo uu sheegay in hub iyo keydkii raashinta iyo dawada ay gacanta ku dhigeen .
Kooxdii Al-shabaab ee ayaa firxadoodka u cararary buuraha fog ka dib markii ay ciidamadu weerar xooggan ku qaadeen,waxaana sarkaalkan sheegay in aysan wax khasaaro ah dhankooda soo gaarin .
Ciidamada badda dowladda Puntland eeloo yaqaan (PMPF) ayaa waxaa ay Al-Shabaab ka saareen buurta Habar-humbulo oo uu ku yaalla ceelka”Ceel unkud” oo il-biyood muhiima u ahaa malayshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab oo buuraleeyda Calmadow ku dhuumaaleysta.
Ciidamada dowladda Puntland ee PSF iyo PMPF ayaa maalmahan dambe sare u qaaday howlagalada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab waxaana loo geystay kooxda Al Shabaab khasaaro baaxad leh .